Semalt विशेषज्ञ: Darodar के हो?
यो लेख पढ्नु अघि, गुगल एनालिटिक्समा तपाईंको वेबसाइट ट्राफिक लगहरू जाँच गर्नुहोस्। शीर्ष रेफररहरूलाई हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईं 'Darodar.com' का साथ कुनै प्रविष्टि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यदि यो अवस्थित छ भने तपाई आफैले सोध्दै हुनुहुन्छ, "दारोदार भनेको के हो?"
दरोदर वेबसाइटले देखाउँदछ कि यो एसईओ सेवाहरू प्रदान गर्ने कम्पनी हो। आर्टेम अब्गारियन, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छन् कि Darodar को मूल निश्चित रूपमा थाहा छैन। अन्वेषकहरू निश्चित रूपमा जान्दछन् कि डरोदरले ट्राफिक उत्पन्न गर्न माकुरोको प्रयोग गर्दछ, रोबोटहरू। txt डेरिभेटिभ्सलाई वेवास्ता गर्दछ, र यसले कुनै पनि सुविधा प्रदान गर्दैन।
दारोडार आफैंमा अवस्थित छन् जहाँ यो ध्यान केन्द्रित गर्न यी अनुक्रमणिका बट्सहरू प्रयोग गरेर हाल छ। उनीहरू यथासम्भव धेरै वेबसाइटहरू क्रल गर्न निश्चित गर्छन् र जिज्ञासु प्रशासकहरू खोज्नको लागि ट्राफिक रिपोर्टहरूमा ट्रेस छोड्छन्। ट्राफिक कहाँबाट आउँदछ भनेर जान्न इच्छुक छन्, प्रशासकहरूले दरोदर वेबसाइटको भ्रमण गर्छन् जहाँ उनीहरूले एसईओ मूल्य प्रस्ताव र उनीहरूसँग साइन अप गर्ने प्रस्ताव देख्दछन्। कम्पनी वैधानिक छ वा छैन कसैलाई थाहा छैन। तथ्य यो हो कि यसले रोबोट.टी.टी.टी. मा समावेश नियमहरु लाई ध्यान नदिई वेबसाइट क्रॉल गर्न क्रुर शक्ति प्रयोग गर्दछ। यद्यपि, तिनीहरू यो पनि दावी गर्छन् कि तिनीहरू जो कोहीले पनि सूचीकृत गर्न सक्छन् जसले उनीहरूको अनुक्रमणिकाबाट हटाउने अनुरोध गर्दछ। यस भनाइको सत्यताको पुष्टि हुन बाँकी छ।
तपाईंको साइटको अनुक्रमणिका दारोदारको कमजोरीहरू
१. स्क्यूड डाटा एनालिटिक्स
एक साइट डरोदरको भ्रमणको एउटा प्रभाव हो जुन ट्राफिक लगमा रेकर्ड हुन्छ। यससँग समस्या यो हो कि यसले सूचीको वैध रेफरल स्रोतलाई धक्का दिन्छ र कार्यकारी टोलीलाई बुझाउन सजिलो छैन किन डरोदर एनालिटिक्स रिपोर्टमा देखा पर्छ।
दारोडारले साइटको बाउन्स रेटलाई पनि प्रभाव पार्छ। किनकि दरोदर बट्स एक पटकमा एकल पृष्ठ भ्रमण गर्दछन्, तिनीहरूको कार्यहरूले बाउन्स रेटहरूलाई उच्च संख्यामा झुक्यो।
डाटा एनालिटिक्स र ट्र्याकिंग अनुप्रयोगहरूले अनावश्यक ट्राफिकलाई फिल्टर गर्न मद्दत गर्दछ। गुगल एनालाइटिक्सबाट तपाईं दारोडार फिल्टर गर्न सक्नुहुनेछ। फिल्टर लागू गरेर, डरोदर अब तपाइँको रिपोर्टमा देखा पर्नेछैन। व्यवस्थापकमा जानुहोस् र त्यसपछि फिल्टर उपकरण चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं दृश्य / प्रोफाइल अन्तर्गत प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
२. ब्यान्डविथ लागत
जब डोरोडर क्रलरले साइटमा अनुरोधहरू गर्दछ, डाटा सर्भरबाट पछाडि सर्छ। यो महँगो हुन सक्छ विशेष गरी यदि सर्वर सीमित ब्यान्डविथमा चल्यो भने। ट्राफिकको ठूलो खण्डहरू जुन उनीहरूले दारोदोरले बनाएका छन् धेरै छिटो थप्न सक्दछन्।
उत्तम डरोदर रोक्नको लागि उत्तम तरिका भनेको रोबोट.टक्सट प्रयोग गर्नु हो जुन यसले सामान्यतया बेवास्ता गर्दछ। साथै, htaccess निर्देशिका वा समान दृष्टिकोण प्रयोग गरेर डोमेन ब्लक गर्न गाह्रो छ किनकि यसले धेरै स्थानहरू ट्राफिक उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्दछ। अर्को विकल्प भनेको सर्भरको स्तरमा ब्लक लागू गर्ने हो जुन सर्भरको प्रदर्शनमा गम्भीर प्रभाव हुन सक्छ र त्यसैले सिफारिस गरिएको छैन।
तपाईं यहाँबाट कहाँ जानुहुन्छ?
यदि डरोदर ट्राफिक लगमा देखा पर्दैन भने, केवल तिनीहरूलाई अब उपेक्षा गर्नुहोस्। यदि तपाइँ ब्यान्डविथ शुल्कमा स्पाइक याद गर्नुहुन्छ वा तपाइँ केवल तपाइँका रिपोर्टहरूबाट हटाउन चाहनुहुन्छ भने, अनुक्रमणिकाबाट सूचीकृत हुन अनुरोध गर्नुहोस्। यदि त्यसले काम गरेन भने, त्यसपछि केहि सर्भरमा आधारित नियमहरू लागू गर्नुहोस् जुन डारोडार.कटबाट कुनै गतिविधिबाट पहुँच अस्वीकार गर्दछ।